Home » Travel » ကဗျာဆန်ဆန်လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့…ကဗျာဝကမ်းခြေ (or) အပျိုစင်ကမ်းခြေ
Posted by Shar Thet Man on Jan 5, 2017 in Travel |4comments
? ? ? “သာမောစွ …. ကမ်းအလှဌာနေ ၊ ကဗျာဝကမ်းခြေ … မွန်တို့ဌာနေ”တဲ့အဲ့ ကဗျာလေးကိုဘယ်တုန်းကဖတ်ဖူးမှန်းမသိပေမဲ့..မှတ်မှတ်ရရနဲ့ စာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
#ကိုရင်လေးတည်ထားတဲ့လေးမျက်နှာဘုရား (0r) Banana Mountain ??
#သေမင်းတမန်ရထားနဲ့ ပြတိုက် ???
တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်ခုတည်းသောချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့မြို့ လေးပါ။ ❤️????
#ကဗျာဝကမ်းခြေ (0r) ရေးမြို့ ရဲ့ အလှဆုံးကမ်းခြေ ⛱?????
ခု Hot ဖြစ်နေတဲ့ခရီးစဉ်လေးဖြစ်အောင်အားရင်သွားဖြစ်အောင်သွားလိုက်ကြပါဦးနော်…တခုခုတော့ရလာမှာပါ။?
.ကြော်ငြာချည်း ဝင်နေတော့လည်း ဖတ်တဲ့သူတွေ ရိုး အီကုန်ပြီပေါ့ကွယ်
.ကြော်ငြာသဘောမျိုး မဟုတ်ပဲ ခရီးသွား အတွေ့အကြုံဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးပေါ့။
ဒါပေမဲ့လည်း ရေးချင်ရာရေး တင်ချင်ရာ တင်ပိုင်ခွင့် သမီးမှာ ရှိပါတယ်ကွယ်။ ဦးတို့က အားရင် ဝင်ဖတ်ရုံပေါ့။ မဖတ်ချင်ဘူးဆိုလည်း မဖတ်ရုံပေါ့ သမီးရယ်
ခြစ်သျှားကို ကျွေးခြင်လပ်ထာ